Madaxweyne Mustafe Iyo Axmed Shide Oo Kusoo Laabtay Magaalada Jigjiga - Jigjiga Online
HomeSomalidaMadaxweyne Mustafe Iyo Axmed Shide Oo Kusoo Laabtay Magaalada Jigjiga
Jigjiga (Jigjigaonline) – Madaxweynaha Dawladda Deegaanka Soomaalida, Mustafe Muxumed Cumar iyo Guddoomiyaha xisbiga Dimuquraadiga Soomaalida (SDP) Axmed Shide ayaa maanta kusoo laabtay caasimadda DDS ee Jigjiga.
Madaxweyne Mustafe oo hawlo shaqo ugu maqnaa magaalada Addis Ababa iyo Guddoomiye Axmed Shide oo sidoo kalena ah wasiirka Maaliyadda iyo horumarinta Dhaqaalaha Dawladda Federaalka Itoobiya ayaa waxa si ballaadhan loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha Garaad Wiil-waal ee magaalada Jigjiga.
Wax faahfaahin ah warbaahinta may siinin Madaxweynaha iyo wasiirku, hase yeeshee waxay wararku sheegayaann in guddida fulinta ee XDS ay shir ku yeelanayeen magaalada Jigjiga maanta gellinkii dambe, halka berri oo Axad ahna uu Golaha Dhexe ee xisbigu ay kulan yeelan ddoonaan.
Maalinta Isniinta ee foodda inagu soo haysa ayaa waxa furmi doona kalfadhigii 9aad ee baarlamaanka Dawladda Deegaanka, waxaana la horkeeni doonaa qodobbo muhiim ah oo dalku ku dhaqaaqi doono sannadka dhawaanta bilaabmaya ee tirsiga taariikhda Itoobiya.
Si kastaba ha ahaatee, waxyaabaha kasoo baxa shirarkaas, ayaa la filayaa in warbaahinta loo soo bandhigo.
Maxaa iska badelay xaaladda doobilihii reer Jigjiga ee BBC-da u sheegay inay qoyskiisa dayrin rabaan